Letpadaung Taung Kyar Buddha Puzaniya Ceremony
Letpadaung Taung Kyar Stupa’s Buddha Puzaniya and dry ration ceremony was held at the near Kyaw Ywar village, Salingyi Township, Yimarbin District, Sagaing Division on 9th October 2019. On the 8th October 2019, local people and the community offer the lighting of 1,000 candles to the Buddha.
Introducing the OHS Professional
In order to sustain ongoing health and safety knowledge to the MYTCL ‘employees,
School Talk in Kangon
On August 26th, 2019 MYTCL team, which includes the representative from PR & CSD and from the QHSE Departments, commenced an educational session with the kangon School children on topics such as health knowledge, pollution, village environmental concerns and the works that are conducted by the professional The team also explained how the MYTCL organization is managing environmental issues to maintain sustainability in its operations that are also in line with international standards.
လက်ပတောင်း တောင်ကြားစေတီ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်
လက်ပတောင်း တောင်ကြားစေတီ တော်မြတ်ကြီး၏ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် နှင့်ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူတော် အလှူတော်မင်္ဂလာ ကို စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ကျော်ရွာ ကျေးရွာ အနီးတွင် အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်နေ့ ၂၀၁၉ တွင် ကျင်းပခဲ့သည်၊ အောက်တိုဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် အဖွဲ့စည်းနှင့် ဒေသခံ များသည် လက်ပတောင်းတောင် တောင်ကြားစေတီတော်ကြီးတွင် မြတ်စွာဘုရားအားရည်မှန်းပြီး ဆီမီတစ်ထောင်ကပ်လှူ ပူဇော်ပွဲ ကိုကျင်းပ ခဲ့သည်။
မြန်မာယန်စီရှိ ဝန်ထမ်းများအားလုံး ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံ ရေး အသိပညာများ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေရန်
၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့တွင် မြန်မာယန်စီ PR & CSD ဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် QHSE ဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် နှင့် စီမံဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျန်းမာ ရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုများ၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်သောအရာများ အစရှိသည့် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ကံကုန်းကျေးရွာရှိ ကလေးများအတွက် အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကို ကျင်ပပေးခဲ့သည်။
2018-2019 CSR Donations for Yegyibin
For the 2017-2018 fiscal year the annual budget that was allocated to the CSD & CSR Program for Yegyibin village totaled $ 49,509.98 USD.
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ရေကြည်ပင်ကျေးရွာ CSR လှူဒါန်းခြင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ဘဏ္ဍရေးနှစ်တွင် ရေကြည်ပင်ကျေးရွာ၏ CSD& CSR လုပ်ငန်းအတွက် လျာထားငွေစုစုပေါင်းမှာ $ 49,509.98 USD ဖြစ်သည်။